कोरोना जितेका सञ्जु खनालको अनुभव : मनोवल उच्च बनाए,नियमित पानी तताएर वाफ लिए - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द २९ बैशाख २०७८, बुधबार १७:४४ 547 पटक हेरिएको
काठमाडौंको पुरानो वानेश्वको एक निजी कम्पनीमा कार्यरत पाँचथर (फिदिम) जोरसालका सञ्जु खनाललाई सामान्य रुघा, खोकी देखियो । रुघा, खोकीसँगै ज्वरो बढेपछि उनलाई कोरोनाको आशङ्का लाग्यो । कोरोना जाँच गर्दा रिर्पोट पोजेटिभ आयो । अहिले उनले कोरोना जितेका छन । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ता सामग्री :-
प्रश्न : तपाईको पिसिआर पोजेटिभ आएछ अर्थात कोरोना संक्रमित हुनुभएछ ? कसरी कोरोना सङ्क्रमित भइयो भन्ने लाग्छ ?
खासमा के छ भने म एक निजी कम्पनीमा काम गर्छु । त्यहाँ एक जना दाई संक्रमित भएको कुरा दाईले जनाकारी दिनुभयो । अनि मलाई पनि समान्य ज्वरो र खोकी लागिरहेको थियो । दाईले मलाई संक्रमण पुष्टि भयो भनेपछि मैले पनि पिसीआर गराए । रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । सावधानी अपनाउदै थिए । दाईलाई पनि कोरोना लागेको थाहा थिएन् । संगै काम गर्दा सरेको हुनुपर्छ । मेरो यहि अनुमान छ ।
प्रश्न : दिनदिनै संक्रमित बढेको बढै छ । मानिसहरुको मृत्यु पनि भइरहेको छ । तपाई सङ्क्रमित भएको थाहा पाउँदा कतिको डर लाग्यो ?
कोरोना फैलेको समाचार दिनदिनै पढ्ने र हेर्ने त गरेको थिए । कोरोना सर्छ भन्ने त डर छदै थियो । तर, सरेछ पनि समान्य डर त हुँदो रैछ । साथै संक्रमण भएकाहरु निको भएको पनि समाचार हेर्ने गरेको थिए । उनीहरुको अन्तवार्ता पनि देखेको थिए । मनोवल उच्च बनाए । त्यस्तो धेरै डर भएन् । कोरोना संक्रमणबाट बच्ने विषयमा धेरै संक्रमित संग अगाडिनै बुझेको थिए । साथै डाक्टरको संल्लाह लिएर होम आइसोलेसनमा बसे । म आफै पनि संक्रमण मुक्त हुनछु भन्ने विश्वासका साथ आइसोलेशनमा बसे ।
प्रश्न : तपाईंसँगै अरू कोकोलाई कोरोना देखियो ?
म संगै अफिसमा ३ जना र संगै डेरा बस्ने एक जना दाई लाई कोरोना देखियो । संगै डेरा बस्ने २ जना भाइहरुलाई कोरोना देखिएन् । उनीहरु अहिले पनि स्वस्थ छन् । मलाई संक्रमण भएको थाहा हुनु अगाडिसम्म हामिसंगै खाना खाने मात्र हैनसँगै सुत्ने पनि गरेका थियौ ।
प्रश्न : के कारणले कहाँ जाँदा कोरोना स¥यो भन्ने अनुमान लाउनुभएको छ ?
कोरोना सर्छ भन्ने हिसावले म खासै अफिस भन्दा बाहिर हिडडुल गरेको थिइन् । तर अरु अफिसमा आउने मान्छेमा थियो की । दाई पनि अफिस भन्दा बाहिर खासै जानु हुन्न थियो । सायद बाहिरबाट आउने मानिसबाट सरेको हो की भन्ने अनुमान छ हाम्रो ।
प्रश्न : अनि घरपरिवारमा कुरा गर्नुभयो कि भएन ?
म काठमाडौंमा छु । घर परिवारमा त सुनाउनै पर्यो नी । नचाइदा समाचार पनि आउछन् । घरमा चिन्ता धेरै लिन्छन भनेर रिपोर्ट पोजेटिभ आउने वित्तिकै सुनाए । सुनाउदा चिन्ता त धेरै लिनुभयो तर मैले आफुलाई त्यस्तो कुनै गाह्रो नभएको जानकारी गराउदै आए । घर परवार र साथिभाइहरुले कोरोना जितिन्छ भनेर होसला भने बारम्बार दिइनै रहनु भयो ।
प्रश्न : तपाई संक्रमित भएर निको हुनुभएको मान्छे, कस्तो हुदो रहेछ त यो कोरोना संक्रमण ?
कोरोना केही हैन भन्ने मानसिकता बोक्नु हुदैन् । कतिपय मानिसलाई कोरोना लाग्ने वित्तिकै मरिन्छ भन्ने मानसिकता पनि छ । तर, मनोवल उच्च राखेर उपचारमा लाग्नु पर्छ । मलाई चै सुरुमा ज्वरो आयो, समान्य खोकी लाग्यो । २ दिन पछि शरिर दुख्न थाल्यो । आँखा र टाउको अत्यधिक दुखेको थियो । डाक्टरको परामर्समा नियमित ओषधि सेवन गरे । नियमित रुपमा आफ्नो स्वास्थका विषयमा डाक्टरसँग परामर्स लिए ।
अनि अर्को कुरा संक्रमणको वेला कतिपय साथिहरुले मनोवल बढाउने र हौसला दिनुभएको थियो । केही मित्रहरु हरुले कोरोनाका विषयमा मनोवल गिराउने किसिमका कुरा पनि गर्नु भयो । केही साथिहरुले त अहिलेको कोरोना नयाँ भेरियनटको हो रे मरिन्छ रे नी भनेर पनि सोध्न भ्याउनुभएको थियो । कुनै पनि संक्रमित संग त्यस्ता किसिमका नेगेटिभ कुरा कसैले नगर्नु उचित हुन्छ ।
प्रश्न : तपाईँले होम आइसोलेशनमा बसेर कोरोनाको उपचार कसरी गर्नु भयो ? कोरोनाबाट बच्न के गर्दा उचित हुन्छ ?
जब कोरोनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । म तुरुन्त आइसोलेट भए । डाक्टरको परामर्स अनुसार उपचार सुरु गरे । साथै पहिला संक्रमित भएर निको भएकाहरुसँग पनि सुझाव लिएर त्यहि अनुरुप अघि बढे ।
तपाईले सोध्नु भएको प्रश्न अनुसार कोरोनाबाट बच्न मैलै चै नियमित पानी तताएर वाफ लिए । गेडागुडिको झोल खाए । थर्मामिटरबाट दिनमा ४ पटक ज्वरो नापे । अक्सिमिटरबाट शरिरमा अक्सिजनको मात्र पनि नियमित मापन गरे । निमोनियाबाट बच्न सबै उपाय अपनाए । स्वास प्रस्वासलाई ध्यानमा राखेर विहान र बेलुकी युवट्युव हेरेर योग अभ्यास पनि गरे ।
प्रश्न : होमआइसोलेसनमा बस्न ध्यान दिनु पर्ने विषय के के हुन् ?
सुरुमा तसँगै बस्ने साथिहरुमा कोरोना नसरोस भनेर अलगै कोठमा आइसोलेट भए । अनि सौचालय छुट्टै प्रयोग गरे । सौचालय जाँदा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरे । साथिहरुले कोठमानै खाना ल्याइदिनुहुन्थ्यो । खान्थे र थाल बटुका आफै सफा गर्ने गरेको थिए । जति सक्तो अरुलाई संक्रमण नहोसा भनेर आफै सरक्षित भए ।
होम आइसोलेशनमा बस्दा बाहिरी वातावरण त्यति धेरै थाहा नहुने हुँदा मनामा धेरै कुरा खेल्न सक्छन् । अरुवेला साथिभाइसँगै हुन तर यो समयसँगै बस्न नमिल्ने भएकाले मनमा विभिन्न कुराहरु खेल्न सक्छन् । यसले मानसिक समस्या पनि ल्याउन सक्ने हुनाले विभिन्न रमाइला पुस्तक पढ्न सकिन्छ । समाजिक सञ्जालहरुमा साभिाइसँग रमाइला गफ गर्ने । युवट्वमा ज्ञानवर्दक कुराहरु हेर्ने गर्नु उत्तम हुन्छ । सञ्चारमाध्यममा आउने नेगेटिभ कुराहरुलाई नहेर्ने नपढ्ने गर्नु राम्रो हुन्छ ।
प्रश्न : तपाई श्रमजिवी मान्छे, अव तपाईको नियमित काममा कसरी फर्कनुहुन्छ ?
अहिले तत्काल त लकडाउन छ । अफिस पनि बन्द छ । अफिसमा अन्यलाई पनि संक्रमण देखिएको छ । अफिस सुरु गर्नु भन्दा अघि अफिसमा सरसफाई गरी भाइरस डिसइन्फ्याक्ट गरेरमा मात्र अफिस सुरु गर्ने कुरा हुँदै छ । अफिसको काम कतिपयले घरमै बसेर गर्न मिल्छ तर, मेरो चै अफिसनै जानु पर्ने हुन्छ । अब झन बढी सतर्क भएर अफिस जाने र नियमित काम गर्ने विचारमा छु ।
प्रश्नः अन्त्यमा अरु केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त म सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्छु । कोरोनासंग कसैले हेलचेक्राई नगर्नु होला । कतिपयले बाटेमा हिड्दा मास्क समेत नलगाई हिडेको देखिनछ । कोरोनाले बलियो दुब्लो । ठुलो सानो केही भन्दैन् । संक्रमण भएपनि गाह्रो हुन्छ । त्यसैले, कोरोना संक्रमिण भरसरक हुन नदिनु होला यदि भइहाले डराउनु हुँदैन मनोवल बलियो बनाउनु पर्छ । कोरोना जित्छु भन्ने मनासाय बनाउनु पर्छ । र, जितिन्छ पनि ।